भारतका बाबाहरू- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
(स्पिकिङ टाइगरद्वारा प्रकाशित ‘द फ्री भ्वाइसः अन डेमोक्रेसी, कल्चर एन्ड द नेसन’ किताबलाई लेखनाथ क्षत्रीको अनुवादमा सांग्रिला बुक्सले ‘मुक्त आवाज : लोकत्रन्त्र, संस्कृति र राष्ट्रवादबारे’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको छ ।) प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १०:०१
मंसिर २१, २०७६ अनिता लामा
एउटा औंसीको मध्यम साँझ  । मलाई थाहा छ— बुबालाई एन्जाइटी डिसअर्डर छ  ।
तर, बुबाको अर्डर नमान्नु भनेको डिसअर्डर झन्–झन् निरन्तर उँभो लाग्नु हो । म बुबाको हरेक डिसअर्डरलाई अस्वीकार नगरीकनै अस्वीकृत गरिदिने प्रयत्न गरिरहन्थें ।
उपचारको शृंखलाभरि यसो गरिरहन पाइन भनें फेरि आफैंलाई डिसअर्डर अनुभूत हुन्थ्यो । त्यसैले औंसीको मध्य चल्दै थियो, सायद एघार बज्न लागेको थियो, म बुबाको अर्डर मानेर उहाँको पूजाकोठा अर्थात् लाथान गएँ । रातो अक्षतासहित बाटेको धूप ल्याउन उहाँको अर्डर थियो ।
अरू बेला यी सब काम आमाले गर्नुहुन्थ्यो । मैले आमाको निद्रालाई बिथोल्न चाहिनँ । बुबालाई यस्तो डिसअर्डर भएपछि म बुबासँगै सुत्ने गर्छु । मुटु र निमोनियाको रैथाने रोगी, त्यसमाथि अहिले दाँतको दुःखाइ छ आमालाई । म सकेसम्म आमाको सयन समय खोस्न चाहन्नँ र ढोका ढक्ढक्याउन जाँदिनँ । ‘सायद यतिखेर तपाई, यो केटी बुबासँगै सुत्छे भनेर दिमागी घनचक्कर लाउँदै हुनुहुन्छ हो ?’
एकतमासजस्तो बनेको पलाँसजीको घुँडामा म हत्केलाले प्याट्ट छोएर बोलाउँछु । ‘ओ ?? अँ होइन ! तपाईंको आत्मविश्वासलाई कसरी उतारूँ भनेर हो । ठीक छ, सो इन्ट्रेस्टिङ, भन्दै जानुस् ।’
यसपछि पलाँसजी सुरुको अवस्थाभन्दा केही गजक्क देखिए । पक्कै हो उनलाई म बुबासँग सुत्छु भन्ने कुराले नै छोएको छ । तर मैले भनिदिएँ, ‘ओके ।’ अनि जिस्किदिएँ, ‘केही क्षण दिग्भ्रम भैहाले पनि म छु नि, एन्जाइटी काउन्सिलर ।’
‘तर बुझ्नुभो पलाँसजी, तपाईंले ममा आइरहेको इमोस्नल सिन बिगारिदिनुभयो । कहाँ पुगेकी थिएँ म भन्नुस् त ।’
‘तपाईं...तपाईं... लाथान जाँदै हुनुहुन्थ्यो रातो अक्षता र बाटेको धूप लिन ।’
‘सही भन्नुभो, म लाथान गएँ तर त्यहाँ त पल्याक–पिलिक अनि घुमीघुमी बल्ने डल्लो झिलिमिली बत्ती पो बलिरहेको रहेछ । आँखै तिरिमिरी भयो । झ्याप्पै निभाइदिएँ र सट्टामा लिड बत्ती बाल्दै अक्षतामा अबिर हालेर रातो बनाइँदिएँ । बाटेको धूपचाहिँ लाथानको पोको पुन्तुरो र र्‍याकतिर कतै भेटिनँ । सिन्की धूप मात्रै लिएर आएँ बुबाको सामुन्ने ।’ बुबाले सानो लवजमा भन्नुभयो, ‘आमालाई बोलाऊ, तिमीले जान्दैन ।’ बुबाले यसो भनिरहुन्जेल मैले सिन्की धूप भाँचेर रातो अक्षताले तीनपटक बुबालाई छुँदै पत्रिकामा राखिसकेकी थिएँ । आमाले अरू बेला गरिरहनुभएको देखेकै हुँ । अनि माथि कौसीबाट अँध्यारो घरनजिकैको बाँस झाङतर्फ धूपलाई हुर्‍याइदिएँ । तल कोठामा आइपुग्दा त बुबा एकाएक ताजा । आवाज पनि स्पष्ट र ठूलो । बुबाको ताजगीले मलाई छक्कै पारिदियो ।
‘बुझ्नुभो त, बुबाको एन्जाइटी पलाँसजी ? तपाईंको कुरा केही बेरमा सुन्छु, पहिले मलाई फिनिस्ड हुन दिनुस् है ।’
मैले पलाँसजीको असमन्जस्यतालाई बुझेरै पेलिरहें, बोलिरहेँ । ‘अँ त पलाँसजी, म बुबाको एन्जाइटी मनोदशा पन्छाउन सकें भन्नेमा मख्ख थिएँ । बुबाको एन्जाइटी र अन्य स्वास्थ्य परिस्थिति गम्भीर भएदेखि नै हो म बुबाको खाटैमुनि ओच्छ्यान लगाएर सुत्ने गर्छु । बुबा ननिदाउन्जेल निद्रा त पर्दैन । कुनै न कुनै पुस्तक पढ्नु या मोबाइलमा मोहित हुनु मेरो यतिबेलाको खास चर्या हो ।’
यतिबेला सिरानी छेउ थियो हर्क गुरुङको लेखहरूको संगालो । पढ्न थाल्दै थिएँ, बुबाले भन्नुभयो, ‘अँ तिमीले बत्ती पो निभायौ कि ? त्यहाँ लाथानमा बलिरहेको झिलिमिली बत्ती बालेरै राख्नुपर्छ है ? केही जान्दैन, बुझ्दैन यी केट्केटीहरूले ।’ बुबा फतफत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म जुरुक्क उठेर लाथानमा बत्ती बाल्न गएँ, नत्र भोलि झिसमिसेमै बुबा उठ्नुहुन्छ र लाथानमा मैले बत्ती निभाएको देख्नुभएपछि फेरि अर्को डिसअर्डर !’
एक साँझ घरको कौसीमा उत्तरतिरको हरियो पहाडसँगै विपश्यना धर्मश्रृंग विहारको तेज अनि भर्खरै बनेको जाम्छेन स्तूपाको चमकसित टोलाउँदै थिएँ, हतार–हतार बुबा माथि आउनुभयो । आमा पनि कौसीमै हुनुहुन्थ्यो ।
‘लाथानरी नाङसाल म्राथान्गो है । म्राप ज्यानालासी डुंगो ।’ (देउथानमा बत्ती बालिराख है । अनि ढोका नि लाउनू ।)
‘लु थेजी थेजी ।’ (लु सुनें सुनें) आमा फत्फताउनुभयो ।
बुबा फेरि हुरहुरिँदै तल जानुभयो ।
कौसीमा आमाले कालो र सेतो रङको तुलसीको गमला, सूर्यको प्रतिमूर्तिलाई साथैमा राखेको अर्को एउटा सानो थान छ । त्यसकै वरपर के–के सामसाम सुमसुम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसपछि कौसीमा घोटी–घोटी खरेटो लाउन थाल्नुभयो ।
‘फोहोर छैन त, किन घोटी–घोटी बढार्नु, हिँड्नुस् तल ।’
‘भोलि बिहान तिम्रो बुबाले पानी ओसार्दा हिलो हुन्छ र चिप्लिन्छ । फेरि राति पानी पर्न पनि सक्छ । अहिले धूलो, माटो सफा गरेर सुक्खा राख्दा भोलि चिप्लो हुँदैन नि ।’
सबैका लागि सहयोगी कोही हुन् भने ‘आमा’ नै हुन् । मनैमनले दर्शन गरें आमालाई । बुबाले दिन बिराएर बिहान एक ‘फोसी’ पानी उमाल्नुहुन्छ । घरको छतको उत्तरतर्फ आफैंले बनाउनुभएको माटोको दुईमुखे चुल्हो छ, तल बारीबाट काम नलाग्ने झिझामिझा, मकैको घोगा, सुकेको बाँस, बोट, फलफूलको सुकेको रूखको हाँगाबिंगा बटुलेर एक थुप्रो बनाइराख्नुहुन्छ र चुल्होमा उपयोग गर्नुहुन्छ । पानी उमाल्ने र दिनभर सेलाउने, त्यसपछि तामाकै भाँडोमा फिल्टर गर्ने र बोतल–बोतलमा पिउनका लागि तयार गर्ने । बुबाको यो वर्षौंदेखिको सेवामा आमाको सम्भार र सहयोग पनि जारी नै थियो ।
‘अँ त पलाँसजी त्यो तामाको फोसी छ नि, करिब ९ वर्ष भयो पाटन मंगलबजार पुगेर बुबा आफैंले किनेर ल्याउनुभएको हो । तामाको र सिल्भरको ठूलो–ठूलो भाँडाबर्तन मंगलबजारमा राम्रो पाइन्छ’ भन्नुहुन्छ बुबा । तपाईंलाई झिँझार त लागेको छैन नि पलाँसजी ? यस्तो पारिवारिकता त सबैको हुन्छ, फेरि मेरो यी कहानी सुन्न तपाईंलाई केको बाध्यता हगि ?’ ‘छैन, छैन म आफैं आज तपाईंलाई सुन्न र बुझ्न आएको, कहाँ झ्याउ मान्छु र ? लौ गाण्डीव उठाउनुस् न, रथ गुडिसक्यो !’
‘तपाईं कृष्ण चरित्र नउभ्याउनुस् । मलाई सबैभन्दा बेसारे पात्र लाग्छन् कृष्ण । फेरि अर्को बहसमा पोखिउँला । यस बखत म तपाईंकै आग्रहले बुबाकै आसपास छु ।’
‘बुबाको एउटा बूढो साइकल छ । यस्ता एन्जाइटी मेडिसिन लिइरहनुहुँदा पनि त्यही साइकल लिएर अस्ति भर्खरै असन जानुभएछ, मलाई त पछि भन्नुभयो, रोकतोक होला भनेर नसोधीकनै जानुभएछ फूलको बीउ लिन ।
केराउ फूलको बीउ चाहिएको रे !
यताउता नजिकै पाइएन रे !
पहिले राख्नुभएको बीउ हरायो रे !
हिजो स्वस्थ हुनुहुँदा एकै समयमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर भ्याउनुहुन्थ्यो साइकलमै । साइकलभरि नाइलनको रंगीचंगी झोला झुन्ड्याएर टन्न तरकारी लिएर आउनुहुन्थ्यो घरमा । त्यो साइकल र एउटा हाते कल दुवै नै सेकेन्ड ह्यान्ड खरिद गर्नुभएको थियो । म कक्षा ८ मा पढ्थें र मेरो कक्षामा होम साइन्सअन्तर्गत वस्त्र सिलाइको पनि कक्षा हुन्थ्यो । प्रत्येक कक्षामा सिलाइका लागि चाहिने वस्त्र किनेर लैजान नसक्दाको पीडा अनि कपडा पसलबाट उधारो वस्त्र लगे पनि सिलाइ मेसिन नहुँदाको ग्लानिबोधले स्थिर बुबाको आँखा पढेपछि म आफैं वस्त्र सिलाइको कक्षाको दिन अक्सर बिरामी बनिदिन्थें र ‘सिक रुम’ मा हाजिर हुन्थें ।
धन्न एक जना दिदी हुनुहुन्थ्यो, सहयोगी । उहाँले आफ्नी छोरीलाई सानो भएको युनिफर्म र जुत्ता दिएर होस् वा खाजा नहुँदा बाँडेर होस् माया दिइरहनुहुन्थ्यो । वस्त्र नल्याएकाले सिलाइको ड्राफ्ट कक्षा पूरा गर्न पाइएन भन्दै लखेटी–लखेटी केटीहरूलाई ड्राफ्ट बनाउने स्केलले पिडौंलामा निर्मम हान्ने र कपाललाई परालको मुठो बाँधेजस्तो असह्य घुमाएर थुचुक्कै पार्ने ती गुरुआमाप्रति चाहिँ कसैको पनि श्रद्धा थिएन । यो अनुशासनको सिकाइ हो वा गरिबीप्रति निर्मम मजाक ? बोल्ने साहस नभए पनि ति गुरुआमाले अरूलाई चुटेको हेर्नचाहिँ सक्दिनथें । जब चुटाइ भेट्थें, मेरो गरिबीलाई चूर्ण हुनेगरी दिने त्यो चुटाइमा मलाई मेरो बुबाको खुजमुजिएको कमिजको रित्तो खल्ती र आँखाको भरिलो हीनतामाथि बलात् आक्रमण गरेको महसुस हुन्थ्यो ।
सरकारी स्कुलमा मिहिनेती र जाँगरिली जेठी छोरीको समेत पढाइ कमजोर लागेपछि माइलीलाई त जेनतेन बोर्डिङ पढाउनुपर्छ भन्ने भएर आमा–बुबा र दिदीको सल्लाहले नै मलाई कक्षा ७ देखि बोर्डिङमा सारिएको थियो ।
ल भयो, स्कुलतिर नहराऊँ होला है पलाँसजी, मैले पलाँसजीको अल्छी घुच्चुक देखेपछि विषयान्तर गरें । आमा र दिदीको मजदुरीबाट र बुबाको सानो तहको नोकरीको पैसा मिसिँदा भित्रिएको ती साइकल र कलजस्ता जिनिसहरूले कम्ता मन रमाएको थिएन । उधारो दिने साहुहरू र्‍याउँर्‍याउँती हेर्थे, बाउले साइकल कसरी किने भनेर । चप्पलमा नयाँ तुना फेरेको दिन पनि चप्पल हेर्थे आँखा फाटेर । उधारो लिने लाइनमा बुबासँगै चपक्क बसेका हुन्थ्यौं दिदी र म, सबैलाई सामान पूरा दिएर पठाएपछि मात्रै उधारो दिन्थ्यो साहुले । उधारोको बिल याक चुरोटको गुलाबी बट्टाको पछिल्तिर लेखिएको हुन्थ्यो । बुबाले त्यसबखत मर्यादाको टाउको निहुराउनुहुन्थ्यो ।’
‘अभाव र गरिबीको दलन प्रायः उस्तै छ, बुबाले दिनुभएको संस्कार र शिक्षादीक्षा कति अनुकरणीय, त्यो अघि तामाङ भाषाबाट बुबाले के भन्नुभएको हो आमालाई आतुङजी ? ‘आतुङ’ मा कुनै विशेषणको बुट्टा लाग्दैन, यो मेरो आफ्नो नियम हो । व्याकरणीय दृष्टिकोण तपाई जान्नुस् । आतुङ स्वयं नै विशेषणले जन्मेकी हुन् । गहिरो वेग छ आतुङ नामसँग । त्यसैले आदरार्थी ‘जी’ नभन्नुस् यो सम्बोधनमा ।
अँ म कौसीमा टोलाउँदै थिएँ । घरको छत सिनित्त सुक्खा पार्नुभएपछि आमा लाथान छिर्नुभयो र मलाई बोलाउनुभयो ।
‘बत्तीको तार दायाँबायाँ कार्पेट र अन्य वस्तु नभेट्ने गरी मिलाएर राख्न लागेको, निभ्यो हेर त’ आमाले आत्तिँदै हुनुहुन्थ्यो । मैले मिलाइदिएँ । बत्ती झिलिमिली बल्यो । आँखै तिरिमिरी हुनेगरी ।’
‘रातभरि किन बाल्ने गरिएको यो बत्ती ? पानी पर्दा, हावाहुरी चल्दा कहिलेकाहीँ करेन्ट सर्ट भयो भने, दुर्घटना हुन्छ, नबाले नि हुन्न आमा ?’
‘बुबा रिसाउँछन्, बाल्नुपर्छ, ल यो तार मिलाऊ ।’
‘कहिलेदेखि बाल्न थालिएको हो यो बत्ती ?’ म अलिक झर्किदिएँ । ‘ए थाहा छैन तिम्लाई ? अस्ति तिम्रो जन्मदिनदेखि खै के सुर चल्यो तिम्रो बाउले आफैंले किनेर ल्याएछन् र बाल्न थालेको । नबाली हुँदैन, रिसाउँछन् ।’
‘कहाँबाट ल्याउनुभएछ ?’ खासमा हाम्रो घरदेखि बिजुली पसल केही टाढा नै छ, लगभग हिँडाइको आधा घण्टाको दूरीमा । अहो, बुबाले त्यसरी दुःख गर्नुभएछ ? बुबाको सम्मानमा खर्चिने शब्द नै पाइनँ मैले । त्यो बत्ती गोलो, भकुन्डो आकारको थियो, लाथानको बीच भागमा ।
‘यस्तरी बीचैमा राख्नुपर्छ त, भित्तामा आड लगाउँदा सुरक्षित पनि हुन्थ्यो,’ आमालाई सुझाएँ ।
‘बीचमा राख्दा सबै देवीदेउतालाई पुग्छ रे नि !’
उत्तरपूर्वीतर्फ राखिएका हिन्दु देवीदेवता, पश्चिमतर्फ राखिएका बौद्ध थाङ्का, पुर्खा तथा बुद्धका विविध अवतार थिए लाथानमा । नभन्दै यो नाङ्सालको तेज चमकचमक गर्दै सर्वत्र पुग्दोरहेछ । बुबाले आमालाई अघि नै तल ओर्लने बेलामा तामाङ भाषाबाट यही भन्नुभएको थियो कि, ‘यो नाङ्साल बाल्न नर्बिस ।’
हरेकपटक घर पुगेपछिको साँझ सधैंजसो बुबासँग मेरो भलाकुसारी चल्थ्यो । कहिले मैले पढिरहेको पुस्तकको विषय, कहिले दिन कसरी व्यतीत भयो भन्ने सन्दर्भ त कहिले खानपिन, समसामयिक राजनीतिक घटना अनि सामाजिक विषय कुराकानीमा आउँथे । समयको रफ्तार घाम घुमेजस्तो यतिबेला हामी सन्तानहरूको काँधमा आइपुगेको थियो । ‘बुबा आउनुभयो, पापा ल्याउनुभयो भन्थ्यौं’ कुनै समय । आज समयको फेरो ठीक उल्टो विन्दुमा पुगेको छ, हातको झोला बिसाउन नभ्याउँदै बुबाको सुलभताले मीठो स्पर्श गर्छ कानमा र कति समृद्ध कान्ति देखिन्छ त्यतिबेलाको स्लो मोसन होप एन्ड लभ एटिच्युड– ‘के ल्यायौ ? के छ झोलामा ?’ बुबाको हात त्यही सुलभतासाथ बिस्तारै सगबगिन्छ झोलातर्फ ।
कहिलेकाहीँ हतारोले केही लैजान पाउँदिनँ । त्यसबखत बिहान खाना बोकेर हिँडेको टिफिनबक्स बुबाले खोल्दै–लाउँदै गरिरहनुहुँदा समयको झरी फेरि त्यो स्कुलको बाल्यकालतर्फ बर्सिन पुग्छ, जतिबेला म ‘सधैं एउटै खाजा’ भन्दै बुबाको अगाडि हुप्प फुलेर बसेकी हुन्थें । अचेल मैले बोक्ने प्लास्टिकको झोलाले बुबाले बोक्ने गर्नुभएको रंगीचंगी नाइलनको बाक्लो झोलालाई झन् सम्झाइदिन्छ । आफ्नो ब्यागसँगै बुबाका लागि र आमाका लागि खत्र्याकखुत्रुक राखेर झोला बोक्दा खुसी हुने पुस्ता हुँ भनेर असाध्यै रमाउँछु पनि ।
एउटा अर्को साँझ केही मीठा खानेकुरा लिएर घर पुगें । बुबा झ्याम्मिन आउनुभएन । बुबाको अनुहार उज्यालो थिएन । कारण पूर्वानुमानित नै थियो । बिहान केही कड्केर भनेकी थिएँ, ‘सुगर र प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा राख्न अलिकति खानपानमा होस गरिदिनुहोस् । बुबाले बार्नुपर्ने कुरा हामीले बार्न मिल्दैन, यो तपाईंलाई कन्ट्रोल होइन, हाम्रो माया र भक्ति हो ।’
आमा र बहिनीबाट थाहा पाएँ कि बुबालाई खुब रिस जागेछ, घरबाट टाढा एक्लै जानुहुन्न भन्ने डाक्टरको परामर्श नाघ्नुभएछ । साँझतिर मात्रै आउनुभएछ । म अफिस हिँडेपछि दूध र खाना केही पनि खानुभएन छ । बाटैबाटो एकतमास हिँड्नुभएछ । मैले चित्त दुखाई भन्दै कहीँकतै एक्लै बसेर रुनुभएछ । अनि शान्त भएर घर फर्किनुभएछ । अनि बल्ल केही फलफूल खानुभएछ ।
त्यो साँझ बुबाको मुहार केही फुलेको र रातो देखिन्थ्यो । उहाँ लामो समय ओच्छ्यानमै टोलाएर बस्नुभयो । तनावग्रस्त अनुहार, रसिलो आँखा र झुकेको शिर । दुनियाँभरको झिटीझ्याम्टा उत्तरदायित्व फुत्त झट्कारेर बुबासँग माफी माग्न मन भयो— पिताप्रेमले पूरै गाल्यो शरीर ।
‘आजलाई आराम होस्’, मनैमनमा माफी मागें ।
नियमित औषधि लिएर बुबा ओच्छ्यान पस्नुभयो । म आमालाई खोज्न गएँ लाथानमा । आमाको सुमसुम चल्दै थियो, लाथानमा । ‘छ्योबोको प्रसाद खाऊ न’, आमाले बुद्धथानमा चढाएको केही फलप्रसादी दिनुभयो ।
‘लौ अहिले त अर्कै नाङ्साल छ त, खोइ त्यो अस्तिको डल्लो झिलिमिली ?’ ‘केही दिन भयो बिग्रेर बनाउन लगेको बाउले, बनेन रे’ ‘अनि अर्को लिएर आउनुभएछ आजै,’ आमाले भन्नुभयो । ‘ए ! म ल्याइदिन्थें नि त्यस्तै झिलिमिली, मलाई भन्नुभएन ?’ ‘तिमीले धेरै तिरिमिरी भयो भन्यौ, त्यसैले यो ल्याएको होला नि ।’ ट्याक्क स्विच दबाएँ । मधुर गुलाबी रङ र पहेंलो किरण छर्दै नाङ्साल बल्यो । बुबाको आस्था, सन्तानप्रतिको भक्ति यो स्विचसँगै छरपस्टियो, उज्यालियो । बुबाले मिलाएर राख्नुभएका हिन्दु देवताका फ्रेम र बुद्ध अवतारका चित्रहरू दुवैमा बराबरी उज्यालो छायो ।
‘मान्छेले देवता मिलाइदिएकै छन् तर देवताको नाममा पो मान्छे मिल्दैनन् त,’ बुबा हमेसा भन्नुहुन्थ्यो ।
मेरो मन बेस्वादले उम्लेर आयो । बुबाले भित्तामा सजाएका सारा देवताका फ्रेमलाई हेरें । मनमनै भनें, “आखिर यी ‘भगवान्’ लाई पनि त उहाँहरू नै उज्यालो दिइरहनुभएको छ नि ।” आमा र म तल ओर्लिंदै गर्दा बुबाले दिदीलाई भन्दै हुनुहुँदो रहेछ, ‘आम्से नाङ्साल म्राथान्जी कि आथान्जी, ङ्योइगो ।’ (आमाले नाङ्साल बालेर राख्यो कि राखेन सोध ।) ।
त्यस रात जब बुबा मेरै सिरानीतर्फ कोल्टे फर्केर निदाइरहनुभएको थियो, मैले बुद्ध सम्झें । भित्तामा बुद्ध अवतारका थाङ्काहरू थिए, एउटा अवतारको कानचाहिँ केही सानो देखिन्थ्यो, चित्रकारले बिगारेछ भन्नुहुन्थ्यो बुबा । निद्रामा बुबाको लाम्चो सेतो अनुहार सलक्क सुस्ताइरहेको लाम्चो कान, बुद्धको सुन्दर तेजोमय स्वरूप बुबाको मुहारमा थपक्क बसेपछि मतिर फर्केर भन्यो, ‘तिम्रो जिन्दगीको नाङ्साललाई कहिल्यै निभ्न नदिनू छोरी । ओम माणी पद्ये हुँम् !’
पलाँसजी, हेल्लो पलाँसजी ! तपाईं किन टोलाउनुभयो ?
‘उफ... आतुङ एउटा कालो पर्दा उघ्रियो । तपाईंले बुबाको एन्जाइटीलाई खुसीले स्याहारेर माया नै माया भित्र्याउनुभयो । मैले ड्याडीलाई मेरो खुसीका लागि यूके पठाएँ बहिनी ज्वाइँसँग बस्न । बहिनीले आफ्नो खुसीका लागि ओल्ड केयर होममा राखिदिई । हामीले खुसीलाई पन्छाउँदै अल्जाइमर भित्र्यायौं । आज बुबाले हामीलाई चिन्नु पनि हुन्न ।’ पलाँसजी त घुँक्कघुँक्क रुनु थाल्नुभो । उनको आँसु बेगवान आँधी र अनियन्त्रित खसेका असिनाको दानाझैं लाग्यो, जो उनलाई उफ्रीउफ्री झम्टिरहेको थियो... ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ ०९:३१